Igalari eBella Cosa - I-Airbnb
Igalari eBella Cosa
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMel
Ecaleni kwehlathi Igalari iyamangalisa. Gxila kwibhafu enkulu ekhululekileyo ngelixa ubukele umboniso weTV okanye imuvi owuthandayo. Phumla kumlilo welog, yonwabele isidlo sangokuhlwa sothando ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo okanye uzulazule kwindlela eqingqiweyo yehlathi. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwezothando. Usenokufumanisa ukuba awufuni ukuhamba kodwa ukuba uyahamba, kukho ngaphezu kwe-80 yeengcango ezikufutshane negumbi onokuthi undwendwele, iindawo zokutyela ezimangalisayo onokutya kuzo kunye neelwandle kunye neendlela zokuhlola.
Igalari yenye yee-B&Bs ezintathu ezimi kwipropathi yeehektare ezintlanu, iBella Cosa kumbindi wengingqi yewayini yaseMcLaren Vale. Yayikade yeyegcisa uPeter Maddox kwaye iselikhaya lemifanekiso eqingqiweyo emininzi awayenzayo ngexesha lakhe apha.
Qasha zontathu iindawo kunye ukuze ubalekele ukuya kuthi ga kwi-10 yabahlobo okanye usapho lwakho.
Yimizuzu engama-45 kuphela emazantsi e-Adelaide, iBella Cosa ilele phakathi kweelokishi ezintle zaseMcLaren Vale naseMcLaren Flat. Le ndawo yaziwa ngewayini ezikumgangatho wehlabathi kunye namava okutya, kunye nezinto ezinomtsalane zendalo. Lo mmandla ubamba ngaphezulu kweengcango ze-cellar ezingama-80 kwaye uneekhilomitha ezingama-30 zonxweme oluthatha umoya.
IBella Cosa yimizuzu nje embalwa yokuqhuba ukuya kumbindi weMcLaren Vale, umgama wokuhamba ukuya eMcLaren Flat kwaye usembindini weendawo ezininzi zokutyela kunye neeresityu.
Andihlali kwisiza kodwa ndikwimizuzu engama-30 kuphela ukuba ufuna nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- McLaren Flat